Liverpool vs Man Utd: Kooxda Weyn, Macalinka Fiican & 2 Kamid Ah Khabiirada Sky Sport Oo Saadaaliyay Kulankan %
Steve McClaren iyo Alex Scott, oo ah Labbo Khabiir kuwaasoo ka tirsan Shabakada Sky Sport ee dalka Ingiriiska, ayaa waxay si weyn hadleen kulan ciyaareedka xiisaha leh, kaasoo udhaxeeya kooxda kubada cagta ee kala ah: Liverpool iyo Manchester United.
Ciyaartaan oo dhici doonta maalinta Sabtida ah ee Isbuuca dambe, lagana daawan Geeska ah Afrika Xiliga Qadada, ayaa natiijada kasoo baxda waxaad kala socon doontaa hadii uu ALLE idmo natiijada kasoo baxda, halkaan Shabakada Laacib.so.
Kulan ciyaareedkaan ayaa waxaa lagu dheeli doonaa garoonka kooxda Reds, kaasoo lagu magacaabo Anfield, kuna yaala Magaalada Liverpool, ee dalka Ingiriiska, iyadoona uu qaado Halkii mar ama ay ka daawan karaan ciyaarta 54,074 oo qofood.
Manchester United ayaa waxay dooneysaa inay daafacato kaalinteeda labaad, taasoo ay hada ugu fadhiso dhibcooyin gaaraya illaa iyo 62 Buundo halka Liverpool ay Jiifto kaalinta Saddexaad iyadoona shaqeysatay kulamadii ay dheeshay 60 dhibcood.
Steve McClaren iyo Alex Scott, ayaa waxay saadaaliyeen ciyaartaan in Manchester United ay ku badin doonta ciyaartaan 4-2, waxayna sababta ku sheegeen inay tahay Jose Mourinho kooxdiisa mid ka weyn, sida ay hadalka udhigeen dhigeeda Reds.
Laakiin, labadaan Khabiir ayaa waxay isku raaceen in Jürgen Klopp, oo udhashay wadanka Jarmalka uu yahay mid ka wanaagsan dhigiisa Mourinho, iyagoona ucowksaday inuu Liverpool ka dhigay koox laga baqo oo weerar fiican leh.